qisa xanuun badan oo aad la ilmeeyn doonto 21. Cabdullaah ibn Kacab ibn Maalik (A.K.R.) oo aabihii Kacab hagi jirey … – Biyacade
November 26, 2014 November 27, 2014 biyacade
qisa xanuun badan oo aad la ilmeeyn doonto 21. Cabdullaah ibn Kacab ibn Maalik (A.K.R.) oo aabihii Kacab hagi jirey …
Cabdullaah ibn Kacab ibn Maalik
(A.K.R.) oo aabihii Kacab hagi jirey markuu
indha beelay, wuxuu yiri: waxaan maqlay
aabbahay Kacab ibn Maalik oo ka
sheekaynaaya waagii uu nabiga (S.C.W.) ka
haray oo aheyd duullaankii Tabuuk. Wuxuu
yiri Kacab: Ma jirin duullaan aanan Nabiga
(S.C.W.) kala qayb gelin duullaankii Tabuuk
ma ahee iyo kii Beder oo aan isaga cidna
lagu canaanan maxaa yeelay Nabiga
(S.C.W.) iyo raggii Beder raacay waxay
doonteen safarkii Qureysh ee badeecad
siday, iyagoo aan dooneyn inay la
dagaalamaan, saa Allaah falay si aysan ku
tala gelin, colkii Quraysheed iyo iyagiina
wada kulmiyey. Waxaan Nabiga (S.C.W.) la
joogey habeenkii togga Caqabah markii aan
kor yeelidda diinta islaamka axdiga kula
galeyney in Beder habeenkaas la iigu
badalana u shallaayi maayo, inkastoo ay
dadku badiyaan hadal haynta Beder.
Duullaankii Tabuuk oo aan Nebiga (S.C.W.)
ka haray haddaan xaalkeyga ka warramo
siduu ahaa, waxaan markaas ahaa markii
aan u xoog iyo xoolaba roonaa, waxayna
ahayd markii iigu horreysey laba rakuub oo
aan yeesho, Nabiga (S.C.W.) markii uu
duullaan qaadayo waxaa caado u ahaan
jirey inuusan daaha ka qaadin arrimaha la
xiriira oo dhan waqti dambe maahee.
Laakiinse markaas qorraxdu aad bay u
kululeyd, safar dheer iyo dhul dhib badan
oo bah gooyo ahna waa la marayey, col
weyn oo xoog lehna waa loo socdey.
Sidaa awgeed buu rasuulkii Alle (S.C.W.)
Daboolka uga qaaday meesha loo socdo, si
loogu diyaar groobo. Waxaa baxay col
weyne aad u culus, oo aan wax la diwaan
gelin karo ahayn, ninkii damco inuu
maqnaado kama uu baqayn in la ogaado,
haddaan waxyi ka soo dagin.Dullaankaas
wuxuu Rasuulku (S.C.W.) qaaday goor ay
mirihii soo go’ayaan, hooska geedahuna
macaan yahay, anigana sahlashaa I gashay.
Rasuulkii (S.C.W.) waa uu diyaar garoobey,
muslimiintiina waa diyaargaroobeen,
aniguna inaan diyaar u kallahaa, anoo aan
waxba qabanna waa soo noqdaa, waxaan is
leeyahay waxba ma ahoo waa kuu
fududahay markii aad doonto iska daba
wareeg ma aan deyn jeer ay Nebigii (S.C.W.)
iyo muslimiintii dhaqaaqeen anigoo aan
waxba diyaarsan. Duullaankii caaradkuu la
baxay oo waa tegey, wax weli ii diyaar ahina
ma jirin, waxaan is iri alleylehe raro, oo
gaar, la iimase qadarin, magacay ba;ye bal
maan falo, markii uu Nebigu (S.C.W.) tegey
yaan calool xumo iyo murugo bilaabay
markii aan dadka soo dhex galo laguma
arko qof aan ku dayan karo, oo weheshan
karo ragga joogaa waa nin munaafaqnimo
lagu yiqiin iyo nin jihaadka aan awood u
lahayn oo Alle ka cafiyey. Nabigii (S.C.W.)
ima uu xusuusan ilaa uu Tabuuk gaarey,
markii uu Tabuuk tegey buu wuxuu yiri
isagoo fadhiya: Kacab ibn Maalik muxuu
falay? Wuxuu yiri nin reer banii Salamah ahi
dharkiisii baa reebay iyo hadba gees is ka
dhugasho. Mucaad ibn Jabal wuxuu ku yiri
ninkii reer Salaamha: wax daran baad ku
hadashay! Wallaahi rasuulkii Alloow kuma
aannu ogin waxaan khayr hayn, rasuulkii
Alle (S.C.W.) waxba ma oran oo waa iska
aamusay.. Nin bidhaamaya oo wirwiraayaa
meel fog ka soo muuqday, wuxuu yiri
rasuulkii Alle (S.C.W.): Abuu Khaysama
noqo, mise waa abuu Khaysama laftigiisii oo
ahaa ninkii suuska timirta ah sadaqaysan
jirey oo ay munaafiqiintu ku durayeen.
Markii aan maqlay inuu Nabigii (S.C.W.) soo
laabtay oo soo socdo yaa walwalkii iga batay
oo been inaan sheegaa igu soo dhacday,
waxaan is weydiinaayey sedee Nebiga
(S.C.W.) uga maslaxdaa arrintaa manta.
Wixii wax garaayey oo ehelkkayga ahaa
baan kala tashaday, markii aan maqlay in
uu Rasuulkii (S.C.W.) soo ogog yeeshay, yaa
tashwiishkii oo dhammi iga ba’ay oo waxaan
go’aan saday inaan runta sheego.
Mar haddaanan haysan wax aan kaga
badbaadi karo. Nabigii (S.C.W.) waa yimid
Sidii ay caadadiisu ahaydna kolkuu safarada
ka yimaado masjidkuu ku soo hormaray oo
laba racadood ku tukaday, oo dabeed
fariistay si uu dadkii ugu qaabilo, markii
sidaa yeelay baa waxaa u yimid raggii haray
oo dhowr iyo siddeetan nin gaaraya, waa u
cudur daarteen waana dhaarteen, waana
uu ka yeelay oo u dembi dhaaf dalbay
waxooda u qarsoonna Alluu u daayey.
Markaasaan anna imid oo salaamay suu
inta dhoolbiray buu wuxuu yiri isagoo caro
laga dareemayo: Kaalay, waa u imid oo hor
fariistay. Wuxuu yiri (S.C.W.): “Maxaa ku
reebay?” soo Alle kama aadan gadan
rakuubkaaga?” Waxaan iri: Rasuul Alloow
(S.C.W.) wallaahi haddaan manta cid kale oo
adduun ag joogi lahaa cudur daar aan kaga
fakado ma waayeen waana doodi aqaan
laakiinse waxaan ogahay, haddaan manta
kuu sheego been aan kugu raalli gelinaayo,
waxaan halis u ahay in Alle iigu caroodo,
haddaan run kuu sheegana iyadaan xag Alle
aayaha dambe ku rajo fiicanahay. Waa
sidaase wallaahi baanan wax cudur daar ah
haysan, wallaahi baysan jirin mar aan ka
xoog iyo xoolo roonaa markaan kaa haray.
Markaan sidaas iri buu wuxuu yiri Rasuulkii
Alle (S.C.W.): Kanu run buu sheegay.
Haddaba iska tag inta Alle xaalkaaga wax ka
oranaayo. Rag reer banii Salimah ah baa
inta i soo raacay i yiri: waxaanu ognahay
inaadan hadda ka hor wax aadan bi’in ma
waxaad kari weyday inaad Nebiga u cudur
daaratid sidii ay raggii kale oo kaa
horeeyeyba ugu cudurdaarteen? Nebiga oo
kuu dembi dhaaf dalba baa qaladkaaga oo
dhan ku filayde, waa igu celceliyeen oo
sidaas wadnaha iiga qabteen ilaa aan ku
fakarey tolow nebiga ma ku noqotaa oo
hadalkaagii hore ma beenisaa. Waxaan
weydiiyey: Cid sidaan yeelay oo kale yeeshay
ma garanaysaan? Waxay yirahdeen: Haah,
labo nin baa sidaada oo kale yiri oo sidaada
oo kale lagu yiri: waxaan iri: oo waa
labadee? Waxay yiraahdeen waa Muraara
bin Rabiic al-Camri iyo Hilaal bin Umayyah
al-Waaqifi, mise waa laba nin oo wanaagsan
oo Beder ka qayb galay, oo lagu dayan karo
markii ay ii sheegeen baan ku sii adkeystay
mowqof kaygii hore. Wixii rag haray Nebigu
(S.C.W.) Seddexdayadii buu amray inaan
dadku nala hadlin, markaasaa dadkiiba naga
cararay oo dhulkii nagu yaraaday oo nin
qalaad aan noqday. Konton habeen baan
sidaas ku jirney. Labadayadii saaxiib ceeb
iyo calool xumo bay guriga la fariisteen.
Aniguse dhalinyaraan ahaa firfircoon oo
salaaddaan dadka la tukan jirey,
carradaydana waa aan mari jirey, wax ila
hadlana ma jirin.
Rasuulkuna (S.C.W.) intaan u tago baan
salaami jirey markuu inta tukado fadhiyo,
markaasaan is oran jirey tolow bishimaha
ma dhaqdhaqaajiyey oo salaanta ma kaa
qaaday. Intaan ku agtukadaan isha ku xadi
jirey markaasuu markaan ka jeedsadana i
fiiriyaa, markaan eegana iga jeedsadaa.
Arrintii waa igu dheeraatay, goyntii ay
muslimiintu igu sameeyeen waa i dhibtay.
Waxaan gaarey inaan fuulo derbigii Abu
Qataadah oo aan ilma adeer ahayn,
dadkana aan ugu jeclaa, waa salaamay,
salaantiina waa iga qaadi waayey. Waxaan
ku iri abuu Qataadow Alle baan kugu
dhaariyeye, ma igu ogtahay inaan Alle iyo
Rasuulkiisa jeclahay? Waa iga aamusey, waa
ku celiyey oo dhaariyey, waa iga aamusay,
haddana waa ku celiyey oo dhaariyey,
kolkuu i yiri: Alle iyo rasuulkiisaa og.
Markaasay ilmo iga soo qubatay, derbigiina
aan ka soo degey. Suuqii baan u soo baxay
mise nin reer Shaam ah oo raashin gasac ah
wataa baa dadka i weydiinaaya oo leh: yaa
Kacab ibn Maalik i tusaaya waa la ii soo
tilmaamay. Waa ii yimid wuxuu ii dhiibay
waraaq uu iiga wadey boqorkii reer
Qassaan. Waxaan ahaa qoraa saa waan
akhristay, mise waxaa ku taal; waxaa nasoo
gaarey saaxiibkaa inuu ku gooyey, Allena
kuma badin dulli, iyo darxumo ee noo imow
annagaa ku wanaajinayne’e. Markaan
akhriyey baan waxaan iri: tanna waa
imtixaan kale, markiiba waxaan ku riday
tinnaarka oo ku gubey. Kontankii markii ay
afartan maalmood tagtaywaxyina uusan
soo deign baa nin uu Nabigu (S.C.W.) soo
dirayii yimid oo yiri: Nabigu (S.C.W.) wuxuu
ku soo faray inaad haweenaydaada ka
tagtid. Ma furaa mise maxaan falaa? Wuxuu
yiri: Mayee ha taaban oo keliya labadaydii
saaxiibna sidaasoo kaluu u faray. Sidaa
awgeed baan xaaskaygii ka codsaday inay
reerkoodii la joogto bal inta arrintaan Alle si
ka oranaayo. xaaskii Hilaal ibn Umayyah baa
iyaduna Nebiga (S.C.W.) u tagtay oo tiri
Rasuul Alloow Hilaal ibnUmayyah waa
sheyb aan tabar lahayn, aan daryeeli karin
naftiisa kaligii, adeegena ma leh, marka ma
aad diideysaa inaan u adeego? Wuxuu yiri:
Maya, laakiinse yuusan kuu dhowaan,
waxay tiri: Dan kama leh dumar, tan iyo
maalintii uu arrinkaanu billowday ilaa
haatanna, waa uu ooyayey. Ehelkaygii baa
qaarkood igu yiraahdeen: Maad Nebiga
(S.C.W.) weydiisatid inuu xaaskaaga kuu
idmo. Hilaal bin Ummayaba waa u idmay
xaaskiisu inay u adeegto’e? waxaan iri:
Kuma dhibayo Nabiga (S.C.W.) weydiisiga
idan kaa oo kale ah, saa wuxuu oranayo ma
garanayo’e, aniguna waxaan ahay nin
dhalinyaro ahe (Hilaal oo kale ma ahi).
Sidaasna toban beri baan ku jirnay oo
kontonkii habeen ay noogu buuxsameen,
tan iyo markii nala gooyey. Waxaan tukadey
salad subax, waxay ahayd habeenkii
kontonaad subaxiisii dambe, anigoo fadhiya
gurigeyga, naftaydiina ciriiryoontey oo
dhulkii balaarnaa sidii Alle naga sheegay igu
yaraaday, baan waxaan maqlay nin buur
korkeeda ka dhawaaqaya oo leh: Kacab ibn
Maaligoow bishaarayso. Markaasaan sujuud
shugri la dhacay, oo waxaan gartay in faraj
yimid. Rasuulku (S.C.W.) markii uu salaaddii
subax tujiyey dadkii buu dadkii u sheegayin
Alle naga toobad aqbalay, markaasaa dadkii
noo soo kala orday iyagoo noo
bishaaraynaaya. Labadaydii saaxiib dad baa
aaday. Anigana ninbaa faras xaggayga u soo
fuulay, nin kale oo reer Aslam ah baa isna
xaggayga u soo ordday oo buur dhaladeed
fuulay oo iiga dhawaaqay. Saa
dhawaaqiibaa faraskii ka soo hor maray
markuu ii yimid ninkii aan codkiisa maqlay
oo ii bishaareeyay baan labadaydii go’ siiyay,
bishaaradiisii darteed. Ilaahay baan ku
dhaartay maalintaa dhar kale ma haysan,
sidaa awgeed baan laba go’ u soo deyntey
oo maalintaas wax kale ma aan haysan
Dabadeedna Nabigii (S.C.W.) baan aadey si
aan qaddirinta iyo tixgelinta iyo mahadda
aan u hayo ugu jeediyo. Intaan u socdayna
rasuulka dadku waxay iila kulmayeen koox,
koox iyagoo toobad aqbalka iigu tahniyaday-
naya. Masjidkii baan soo galay, waxaan
arkay nebigii (S.C.W.) oo fadhiya dadkiina
hareero fadhiyaan waxaa soo kacay oo igu
soo orday Dalxag bin Cubeydullaah waana i
salaamay oo ii tahniyadeyey, isaga keliyaana
muhaajirintii iiga soo istaagay – Kacab
Dalxah ma illoobi jirin. Waxaan salaamay
Nebigii (S.C.W.) oo wajigiisu farxad la ifayo,
wuxuu yiri: bishaarayso waa maalintii
kuugu khayr badnayd oo ku soo marta tan
iyo markii hooyadaa ku dhashay. Waxaan
iri: Rasuul allow ma xaggaaga mise waa xag
Alle? Wuxuu ku jawaabay: Mayee waa xag
Nabigu (S.C.W.) markuu farxo waxaad
moodi jirtey in wejigiisa gabal dayax ahi
inay saran tahay, siduu u dhalaalayo, oo
aan uga garanayo. Markii aan hortiisa
fariistey baan waxaan iri: Nebi Alloow
maalkayga oo dhan hor alle ma u
sadaqaystaa toobada la iga aqbalay awgeed?
Wuxuu yiri: maalkaaga wax ka hayso
sidaasaa ku fiican. Waxaan iri: saamigii aan
Khaybar ka helay baan la harayaa. Waxaan
iri: Rasuul Alloow runtii baa Alle igu
badbaadiyey, toobadkeenkaygana waxaa ka
mid ahaanaya, inaanan sheegin waxaan run
ahayn inta aan noolahay. Wallaahay
garanmaayo muslimiinta imtixaanka Alle i
mariyey mid ka wanaagsan qof uu mariyey,
ilaa maalintii aan hadalkaas nebiga u
sheegay tan iyo maanta uma qastin inaan
been sheego, inta cimriga iiga hartayna in
Alle iga dhawraan rajeynayaa. Wuxuu Alle
soo dejiyey aayadahan:
“ Alle waa ka toobad aqbalay Nabiga iyo
Muhaajiriintii iyo Ansaartii raacay saacaddii
dhibaatada, markii qaar ka mid ah
qalbiyadoodu ku sigteen inay qalloocdaan,
kadib; dabadeedna waa ka toobad aqbalay, waa
u turid iyo naxariis badan yahaye iyo seddaxdii
dib loo dhigay jeer dhulkii ku yaraaday wuxuu
ballaarraa. Naftoodiina ku ciriiryoontay ayna
yaqiinsadeen inaan Alle meel looga irkadaa
jirin isaga maahee, dabadeedna uu toobadii ka
yeelay si ay u toobad keenaan, Alle isagaa
toobada Aqbalaha naxariista badan ahe. Kuwa
xaqa rumeeyoow dhowra waajibka iyo xilka uu
Alle idin saaray oo run sheegyada ka mid
ahaada” Suurada at-Towbah:117-119.
Wuxuu yiri: Kacab: wallaahi garanmaayo
nicmo Alle ii galay intii uu diinta igu
hanuuniyey kaddib oo ka weyn runtii aan
Nabiga (S.C.W.) u sheegay, maxaa yeelay
haddaan maalintaas been u sheegi lahaa,
waa aan halligmi lahaa sidii ay u halligmeen
kuwii beenta u sheegay oo Alle ka soo
dejiyey wax cid lagu sheego wixii ugu
xumaa. Wuxuu yiri Alle weyne:
“ Waa idiin dhaaran doonaan markii aad
u noqotaan si aad isaga deysaan, ee iska
daaya waa qurune, hoyaadkooduna waa
Jahannama oo jasadii wixii ay kasbadeen
ah, waa idiin dhaaranayaan, si aad uga
raalli noqotaan, haddii aad ka raalli
noqotaanna Alle raalli kama noqdo qoon
faasiqiin ah.” Suurada at-
Wuxuu yiri Kacab (A.K.R.): Seddexdayada
waa na loo kaadiyey, kuwaasna nebiga
(S.C.W.) waa uu ka yeelay markii ay u
dhaarteen, waana u dembi dhaaf dalbay,
axdina waa uu la galay, ilaa Alle arrimaha
sidaas aan soo sheegnay u kala xugmiyey.
Marka Alle leeyahay: (Seddexdii dib loo
dhigay) dib u dhigaasi ma aha hariddii aan
duulaanka ka harnay, ee waa dib u dhigiddii
Nebigu (S.C.W.) nala sugayey in xaalkayaga
Alle wax ka yeelo, markii uu iyaga dhaartii
Werin kale oo xadiiska wuxuu sheegayey
inuu Nabigu (S.C.W.) Tabuuk u duuley
maalin Khamiis ah, jeclaana inuu
khamiisaha baxo. Xadiis kalena wuxuu
lahaa: “Safarka wuxuu ka imaan jirey
nabigu maalintii, weliba barqadii, wuxuuna
ku soo hormari jirey masjidka oo inta labo
rakcadood ku tukado fariisan jirey”.
Previous ILA TALIYA INTEE JEER BAAN U TAGAA RAAXADA GUURKA
Next Sawiro dayac tir lagu sameeynayo Nalalka ku shaqeeya cadceeda ee magaalada muqdisho